မဖြစ်နိုင်သောအချစ်အတွက် Santa Muerte သို့ဆုတောင်းပါ။ ? + ထိရောက်တယ်
1 မဖြစ်နိုင်တဲ့မေတ္တာအတွက် Santa Muerte ကိုဆုတောင်းခြင်းကဘာလဲ။
မဖြစ်နိုင်တဲ့မေတ္တာအတွက် Santa Muerte ကိုဆုတောင်းခြင်းကဘာလဲ။
အ ပဌနာ သူတို့ကသင်မှာချင်တဲ့အရာတိုင်းအတွက်အစေခံပါတယ်။
la စန်တာ Muerte ၎င်းသည်နှလုံးသားနှင့်ခံစားချက်များကိစ္စရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာကကျွန်တော့်တံခါးကိုခေါက်တယ်။ ဒါပေမယ့် Santa Muerte
ကျွန်ုပ်၏ဆုတောင်းခြင်းကိုနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်၏လက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာအတွက်အဖြေမရှိကြောင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်းများစွာဖြင့်တောင်းပန်ပါ၏။ ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းသံကိုနားထောင်ရန်ကျွန်ုပ်နားထောင်နေပြီးကျွန်ုပ်၏ဖြူမိန်းကလေးဖြူပြောသောအခါကျွန်ုပ်မည်သို့ဖြစ်ခြင်းကိုခံစားရမည်ဟုမျှော်လင့်သည်။ ငါချစ်သောလူတစ် ဦး သည်မဖြစ်နိုင်သောအချစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အနားတွင်ရှိနေခြင်းအားဖြင့်သူမဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ဖြစ်နိုင်ချေရှိခြင်းကြောင့်သင်ထံသို့သင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုလူကိုကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်စေချင်ပြီးသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ပြန်လည်တုံ့ပြန်စေလိုပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်သည်သင်၏ယုံကြည်ချက်အပေါ်သစ္စာရှိသောယုံကြည်သူဖြစ်ပါ၏။
အိုးအဖြူရောင်ညီအစ်မ၊ မင်းကိုငါယုံကြည်တယ်၊ မင်းကိုယုံကြည်တယ်။ မင်းငါ့စကားကိုနားထောင်ပြီးငါ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ငါမျှော်လင့်တယ်။ ထိုနည်းတူ၊
ဒါ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်ဆုတောင်း စန်တာ Muerte အံ့ဖွယ်ပါပဲ!
အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုအလွန်အမင်းယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည်အရာများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွင်ကောင်းမွန်ပြီးဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အံ့အားသင့်ကြသည်။
ထိုအချိန်တွင်ဤဆုတောင်းခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်လက်နက်ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းသည်ခိုင်မာသော၊ စစ်မှန်။ တစ်သက်တာချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်စစ်ပွဲကိုအနိုင်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည်၊ အထူးသဖြင့်နှလုံးသားမှယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြုလျှင်။
ဒီဝါကျကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်အချို့သောအကြံပြုချက်များသည် ငါတို့၏အိမ်၌အထူးယဇ်ပလ္လင်ကိုတည်ရမည် ငါတို့နှစ်ခုရှိသည်သော အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖယောင်းတိုင်အဖြူနှင့်အနီရောင်တို့သည်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများ၏ဓာတ်ပုံသုံးခုနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။